အတွေးအမြင် | Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
By celiafyan 3019 days ago on အတွေးအမြင် from instaplimp.com
No-Fuss Forex Strategy Master Solutions Around Simple Details - Articulos
By sadyebynu 2983 days ago on အတွေးအမြင် from lucerosaldana.com
Do you want to get into currency trading?
This is exactly the right time! This article will cover most of the questions that you might have. Here are tips to get started trading currencies.
ပျောက်ဆုံးသွားသော ဥသြဆွဲသံ သင်ဘယ်လိုခံစားမိသလဲ
By cherrythet 3105 days ago on အတွေးအမြင် from popularmyanmar.com
ဥသြဆွဲသံကတော့ ကြားမိတာပေါ့။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားမိလာတာ။ လူ ပျိုပေါက်ရောက်တဲ့အထိကို အဲဒီအသံ တွေ ကြားခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီ အချိန်ရောက် လို့ရှိရင်လည်း အဲဒီအသံကို နားစွင့်ပြီး တော့ကို တကူးတကကို နားစိုက်ထောင်ခဲ့ တာ။ ဒီအချိန်ကျရင် လူတွေဘာလုပ်ကြ မလဲ၊ လမ်းသွားလမ်းလာတွေရပ်ကြတယ်။ အလေးပြုကြတယ်။ ကားတွေရပ်ပေးရ တယ်။ သင်္ဘောတွေဆိုရင် ဥသြတွေ ဆွဲ ကြတယ်။ တချို့ကားတွေဆိုရင် ဟွန်းတွေ တီးကြတယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။ အဲဒီ အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဲဒီဥသြသံကြား ရင် လူတွေက ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြတာပေါ့။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုစစ်တမ်း (EIA) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် ပညာရှင်နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အမြင်
By htainlin 3076 days ago on အတွေးအမြင် from www.7daynewsjournal.com
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်သည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့သည့် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အချိန်ယူ အသိပညာပေးရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်သည်။ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ လေးနိုင်ငံမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုစစ်တမ်း (EIA) ဥပဒေကို နမူနာယူကာ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ EIA ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် ဒဏ်ကြေးငွေများကိုလည်း သတ်မှတ်ထားသည်။ EIA လုပ်ဆောင်ရမည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များပါဝင်သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရေးဆွဲနေသည့် EIA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်မျ
၀မ်းနည်းဖွယ် ရက်စွဲ “ဆဲဗင်း ဂျူလိုင်”နှင့် အမှတ်တရနေ့ရက်များ
By marlarnyein 3107 days ago on အတွေးအမြင် from www.mizzimaburmese.com
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံး တိမ်လွှာတိမ်ရိပ်တို့က မိုးရိပ်ဆင်လျက် အုံ့မှိုင်းနေသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၅၁ နှစ်က ယနေ့လို
အချိန်တွင် နိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်လူတစ်စုနှင့် ကျောင်းသားတို့ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့သည့်နေ့။ ၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ဦးဆောင်သည့် စစ်တပ်မှ မတ်လ ၂ ရက်တွင် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကျောင်းသားများနှင့် တင်းမာမှု ဖြစ်ပေါ်လာ
ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများအတွက် တင်းကျပ်သည့် အဆောင်စည်းကမ်း ၂၂ ချက် ထုတ်ပြန်မှု၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်တွင် အဆောင်များကို ညဘက်တွင် မီးဖြတ်မှုများ အစိုးရက လုပ်ဆောင် လာခဲ့သည်။
အကြားအမြင်ရ အိုင်းစတိုင်း နှင့် အနာဂတ်ကမ္ဘာ
By kyawswaraung 3111 days ago on အတွေးအမြင် from www.myawady.com.mm
အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကား တစ်ခွန်းက ဒီလိုပါ။
"ကျနော်ကတော့ နည်းပညာဟာ လူသားတုိ့ရဲ့  အသုံးဝင်မှု ထက် ပိုကျော်လွန် သွားမှာ စိုးရိမ်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ လူပျော့လူညံ့ မျိုးဆက်တွေ ပဲ ဖြစ်တည်လာ လိမ့်မယ်"တကယ်မှန်ကန်လာပါတယ်။ လူသားတွေဟာ နည်းပညာကို တီထွင်တယ် ဆိုပေမယ့် ယင်းနည်းပညာအပေါ် မှီခိုတဲ့ လူသားအရေအတွက်က ပိုများ လာလေတော့ တကယ်ပဲ idiot တွေများလာ ပါတယ်။ တွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းအား၊ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအား၊ လုပ်ကိုင်နိုင်မှုစွမ်းအား၊ ကြိုးစားနိုင်မှု စွမ်းအား ဟာ အနာဂတ်လူငယ်တွေမှာ နည်းပါးလာနိုင်တယ်လို့ အိုင်းစတိုင်းက ကြိုတင် ခန့်မှန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဘယ်ရောက်ရောက် နည်းပညာပစ္စည်
သင့်ရဲ့ အတိတ်ဘ၀ ရှိနိုင်ကြောင်း သိနိုင်တဲ့ သက်သေ ၄ ချက်
By aungaung 3093 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
အတိတ်ဘ၀ကနေ ပြန်လည် ရှင်သန်လာစေနိုင်တဲ့ အစွမ်း ရှိနေပါသတဲ့။ အဲဒီအချက်ကို အနာရောဂါကုထုံးမှာ အသုံး ပြုပါတယ်။ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့၊ စိတ်နဲ့ခန္ဓာ၊ ရုပ်နာမ်တရား ၂ ပါး၊ ကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်များ၊ လက်ရှိ ဆက်ဆံရေးတွေ ပြေလည်စေဖို့…။ အခုမှ တွေ့ရတဲ့ သူစိမ်းတစ်ဦးကို အရင့်အရင် ကာလများဆီက တရင်းတနှီးနဲ့ကို သိနေခဲ့သလိုလို…။ အဲဒီနေရာတွေကို ရောက်ဖူးခဲ့သလိုလို…။ .. အစရှိတဲ့ အတိတ်ခံစားချက်တွေဟာ လူတိုင်းမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ဟာ အတိတ်ဘ၀ တစ်ချိန်ချိန်တုန်းက သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့ဖူးသူ… အဲဒီနေရာကို ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာတွေရဲ့ သက်သေပါပဲတဲ့။
ဆရာတော်ဘုရားက ထမင်းဝါးပြီး ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးက အိပ်နေမှဖြင့်
By sandarmoe 3122 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
မြန်မာတို့ မြန်မာ့ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုစရိုက်လက္ခဏာများနှင့် တစ်စတစ်စ အဟပ်ကွာ၍လာရပုံကို ကိုနေ ဝင်းမြင့်ပုံဆောင်၍ ပြောလေ့ရှိသော ဟာသကလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါသည်။ နည်းနည်းကလေး လက်ဆင့် ကမ်းပါရစေ။
မိခင်ဖြစ်သူက သမီးကိုဆရာတော်ဘုရားထံသို့ စေလွှတ်ကာ လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကပ်လှူခိုင်းပါ သည်။ သမီးကလည်းမိခင်ခိုင်းစေသည့်အတိုင်း လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ကို ဆရာတော်ဘုရားထံ သွား ရောက်လှူပြီးနောက် ပြန်ဖို့ရာခွင့်ပန်သည်။ သို့သော် ရဟန်းသံဃာနှင့် မည်သို့စကားဆိုရမည်ကို သူမသိ။ ထို့ကြောင့် “တပည့်တော်ပြန်ကြွလိုက်ဦးမယ်ဘုရား” ဟု တင်လျှောက်မိရာ ဆရာတော်ဘဝင် မကျဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ခေတ်လူငယ်တို့ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိလာစေရန် သွန်သင်ပေးဖို့ သတိ ပေးရ
ပညာနိုင်ငံတော် (၄) စာဖတ်ခြင်းနိုင်ငံ
စာဖတ်ခြင်းမှာ အရေးကြီးကြောင်းကို မကြာခဏ ပြောဆို ဆုံးမမှုများ ရှိနေပါသည်။ ကျောင်းတိုင်း၏ နံနက်ခင်း စုဝေးပွဲ assembly နေရာမျိုးတွင်ဖြစ်စေ၊ လူငယ် ကျောင်းသားများအတွက် အခမ်းအနားများတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ ဆရာဆရာမများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများက စာဖတ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလေ့ ရှိကြပါသည်။ အတန်းထဲတွင်လည်း ဆရာဆရာမများက စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀ တိုးတက် အောင်မြင်နိုင်ကြောင်း သွန်သင်ဆုံးမကြသည်။ ရပ်ရွာတွင်းမှာလည်း လူငယ်များကို လူကြီး သူမများက စာဖတ်ကြရန် လှုံ့ဆော်ကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် တနိုင်တပိုင် စာဖတ်ရှိန်ကို မြှင့်တင်မှုများ ရှိလာခဲ့သည်။
By htainlin 3122 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
ခေတ်ပြိုင်စာပေကို ဖတ်နေသည်။ ကျောင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ကဗျာ၊ စကားပြေကို သင်ကြားနေသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ သည် ကျောင်းသင်ဘာသာရပ်ကို စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန်၊ အမှတ်ကောင်းရန် မစဉ်းစားမိဘဲ၊ လူ့သဘာဝအဖွဲ့အနွဲ့များ၊ လူသားဆန်မှုများ၊ လူသားအချင်းချင်း ပိုမိုစာနာနားလည်မှုများကို ခံစားနေရသည်။ ထို့ပြင် စကားများ၏ အဓိပ္ပါယ် များ၊ အားကောင်းမှုများ၊ သိပ်သည်း ကျစ်လျစ် မှုများကိုလည်း ခံစားနေရသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် အတန်းထဲတွင် ပျော်ရွှင်စွာ သင်ကြားခံရ၏။ ကျောင်းပြဋ္ဌာန်းချက် စာပေ၏တန်ခိုး၊ သင်ကြားပေး သူ၏ ခံစားမှုစွမ်းအားနှင့်၊ အတွေးအခေါ်ကျယ်ပြန့် လွတ်လပ်မှုတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘဝမှာပင် ရသစာပေကို အလေးအနက် စိတ်
တစ်ခါတစ်လေလောကကြီးဟာ စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာတောင်မရှိတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်တတ် တယ်။ ကောင်းတာတွေရှိသလို ဆိုးတာတွေလည်းရှိရဲ့။ ကျွန်မတို့က လွတ်လပ်စွာစိတ်ကူးယဉ်ခွင့်မရ တာ ကြာခဲ့ပေါ့။ ကျွန်မတို့အတွေးတွေစိတ်ကူးတွေက ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ အထဲမှာပဲရှိခဲ့တယ်။ ဘောင် ကျော်ပြီးတွေးမိရင်လည်း အပိုပဲလေ။ တကယ်မှဖြစ်မလာဘဲ။ အဲဒီတော့ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ အထဲက ပဲတွေးခွင့်ရခဲ့တာ ဘာဆန်းလဲ။ အဲဒီအတွေးတွေထဲမှာ “ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်” ဆိုတာကြီးမပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းက ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
By miemiekhine 3114 days ago on အတွေးအမြင် from popularmyanmar.com
မြန်မာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ အမှန် အတိုင်းပြောရရင် Technology ပိုင်းနဲ့ Competitor Market မှာ တိုးဖို့ အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ Human Capacity for Telecommunication Business ဟာ တော်တော်အားနည်းတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့နဲ့ ပေါင်း ပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ နည်းပညာ ပိုင်း အဆင့်အတန်း အချိန်အတိုင်း အတာ တစ်ခုရသွားခဲ့ရင် မြန်မာကုမ္ပဏီ တွေလည်း သူတို့နဲ့ တန်းတူ လုပ်ကိုင်နိုင် မှာပါ။
နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိ (Telecom Company) များကို အချိန်ယူစိစစ်ပြီး ကမ္ဘာသို့ သတ်မှတ်ကြေညာထားသည့် အချိန် ကာလအတိုင်းြ
By kokopaing 3119 days ago on အတွေးအမြင် from news.yatanarpon.com.mm
ကျွန်တော် “ရွှေလက်ဝါ” ပါ။ ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ စာပေ ဟောပြောပွဲတွေလည်း အတော့်ကို ကျင်းပကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်နဲ့ နီးစပ်ရာ စာပေဟောပြောပွဲတွေကို အခုတလော ဆက်တိုက်ဆိုသလိုမျိုး ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခုခေတ် စာပေဟောပြောပွဲတွေက ကျွန်တော်နဲ့ Different နည်းနည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုတော့ ဆရာဖေမြင့်၊ ဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း) တို့ကလည်း သူတို့ပဲ ပြောနေရတာထက် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူရှိရင် ကောင်းမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီတော့လည်း အခုခေတ် “စာပေဟောပြောပွဲ” တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင်လေးကိုလည်း နည်းနည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုပြောမှာတွေက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါ
ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွေးချယ်ပေးတဲ့ သမ္မတပဲ လိုချင်တယ်
By YaminThu 3078 days ago on အတွေးအမြင် from www.first-11.com
မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ မရင့်ကျက်မီ အာဏာသိမ်းမှုတွေ ကြုံခဲ့ရပြီး အရပ်သားသမ္မတ စစ်စစ်ထက် စစ်ခေါင်းဆောင်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ နှစ်တွေက များလှပါတယ်။
ပြည်သူကြားမှ ပြည်သူနဲ့အတူ နိုင်ငံတော်အတွက် ဒိုးတူပေါင်ဖက် ရုန်းထလုပ်ကိုင်ရာမှ ထူးချွန်လို့၊ အားကိုးလောက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိလို့၊ နိုင်ငံတော်အပေါ် တာဝန်အရ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ထဲအသည်းထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကောင်းစားစေချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိလို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပြည်သူတွေက အသိအမှတ်ပြု ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပြည်သူကြားက ပြည်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ရမှာပါ . . . . .
သမ္မတဆိုတာ အချို့နိုင်ငံမှာ အရုပ်တစ်ရုပ်လို အနေအထားမှာ ရှိတတ်သလို အချို့နိုင်
ဖေဖေ့ကို ပြန်လျော်ပေး၊ မေမေ့ကို ပြန်လျော်ပေး၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လျော်ပေး
By jackiekyaw 3080 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဟီရိုရှီးမားမြို့ကို အမေရိကန် စစ်လေယာဉ်က အနုမြူဗုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲ နာဂါစကီမြို့ကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် စစ်ဝါဒီ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ လက်နက်ချလို့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်လည်း အဆုံးနိဂုံး သတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အနုမြူခေတ် ကိုလည်း မွေးဖွား ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမယ့် လူ့သမိုင်းမှာ အဆုံးဝါးဆုံးသော အနုမြူဗုံးဒဏ်ကြောင့် မြို့ကြီး ၂ မြို့စလုံး ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေခဲ့ပြီး လူ ၂ သိန်းလောက် သေကျေ ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ အနုမြူဗုံး အဆိပ်သင့်မှုကြောင့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ လူများစွာတို့ သေကျေခဲ့ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် အများနှင့် ဆက်စပ်သည့် သဘောဆောင်လာကြောင်း သတိထား မိကြပေလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းခွင် ဆိုသည်မှာ အင်နှင့် အားနှင့် ကာယ သို့မဟုတ် ဉာဏအား စိုက်ကာ လုပ်ဆောင်ကြရသည့် နေရာ တစ်နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝ၊ လူ တစ်ဦးချင်း အနေအထား၊ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သုံးသပ် လေ့လာပြီးမှ လုပ်ကိုင်ကြရသည့် နေရာဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းခွင် အမျိုးအစားပေါင်း များစွာ ကွဲပြားနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင် အနေအထားလည်း အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်သည်။ မည်မျှ ကွဲပြား ခြားနားသည်ဆိုစေ တူညီစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်မှသာ အောင်မြင်နိုင်သည့်ကိစ္စ တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ ယင်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှုရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘာသာမတူ မိဘနှစ်ပါးမှ ဆင်းသက်လာသော ကလေးသည် မိခင်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိ
By aungaung 3113 days ago on အတွေးအမြင် from news.yatanarpon.com.mm
သံဃာတော်များနှင့် ဥပဒေ ပညာရှင်များ ပူးပေါင်းကာ အကြမ်းဖျင်း ရေးဆွဲထားသော မျိုးစောင့် ဥပဒေအရ ဘာသာမတူသော မိဘနှစ်ပါးမှ ဆင်းသက်လာသည့် ကလေးသည် မိခင်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိကြောင်း မျိုးစောင့်ဥပဒေ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်သည့် ဥပဒေပညာရှင် ဦးရဲခေါင်ညွှန့်က ပြောသည်။ “မျိုးစောင့် ဥပဒေအရ ဘာသာ မတူသူနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီး လက်ထပ်ပြီး ရလာတဲ့ ကလေးကို မိခင်ကပဲ အပြည့်အဝ စီမံပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ကလေးရဲ့ ဘာသာကိုလဲ မိခင်ဘာသာကိုပဲ သွတ်သွင်းရမယ်” ဟု ဥပဒေပညာရှင် ဦးရဲခေါင်ညွှန့်က ဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်က အောင်ဆန်း တပ်ဦး ပရိဟတ္တိ စာသင်တိုက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်
By suwatisoe 3415 days ago on အတွေးအမြင် from yawainwe.com